१२ सांसद जसले यो ऐतिहासिक प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेनन् | १२ सांसद जसले यो ऐतिहासिक प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेनन् – हिपमत
कोही बाथरुममा लडेकोले संसद्मा आउन पाएनन्, आएका पनि पखाला लागेर हिँडे
संविधानको निसान छापमा रहेको नेपालको नक्सा अद्यावधिक गर्न ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट शनिबार पास भएको छ । प्रतिनिधिसभामा उपस्थित सबै दुई सय ५८ सांसदले प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा संविधान संशोधन विधेयकमाथि दफावार छलफल भइसकेपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७’ लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन् । त्यसपछि सभामुखले संविधान संशोधनमा हस्ताक्षर गर्ने प्रक्रियाबारे सदनलाई जानकारी गराएका थिए ।
हस्ताक्षर प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि सांसदलाई हलभित्र बोलाउन पाँच मिनेटसम्म विभाजन घन्टी बजाइएको थियो । विभाजन घन्टी बन्द भएपछि हलका ढोकाहरू बन्द गरिएको थियो ।
प्रस्तावका पक्षमा रहने सांसदका लागि सभामुख आसनको दायाँतिर रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको नामावलीमा दस्तखत गर्नुपर्ने थियो । प्रस्तावको विपक्षमा रहने सांसदले सभामुखको आसनको बायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको नामावलीमा दस्तखत गर्नुपर्ने थियो । प्रस्तावमा मत दिन्नँ भन्ने पक्षमा रहेका सांसदका लागि सभामुखको पछाडिपट्टि रहेको उपकक्ष लबीमा राखिएको नामावलीमा दस्तखत गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
सबै सांसद सभामुख आसनको दायाँतर्फको लबीमा गएर हस्ताक्षर गरे । विपक्षमा वा मतदान गर्दिनँ भन्ने लबीतर्फ कोही पनि गएनन् । कुनै सांसदले आफ्नो मत सच्याउन चाहेमा मतदान सकिएको तीन मिनेटभित्र माग गरेमा सच्याउन दिने सुविधा पनि थियो । तर, कोही पनि सांसदले आफ्नो मत सच्याउन चाहेनन् ।
यसरी सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर संविधान संशोधन प्रस्तावलाई पारित गरे । प्रतिनिधिसभाका कुल दुई सय ७५ सांसदमध्ये दुई सय ५८ जनाले दस्तखत गरेको संसद् सचिवालयले बताएको छ ।
दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा चारजना सांसद निलम्बनमा छन् । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा विजयकुमार गच्छदार, बम विस्फोट काण्डमा मोहम्मद अफताब आलम, ठेक्का प्रकरणमा हरिनारायण रौनियार र कैलाली घटनामा रेशम चौधरी निलम्बनमा छन् । मत बराबरी नभएसम्म सभामुखले मतदानमा भाग नलिने परम्परा छ ।
प्रतिनिधिसभाका दुई सय ७१ सदस्यमध्ये संसद्मा १२ जना सांसद अनुपस्थित रहेको संसद् सचिवालयको बताएको छ । संसद्मा अनुपस्थित रहेका सांसदमध्ये धेरैले बिरामी भएर आफू आउन नसकेको बताएका छन् ।
नेकपाका हरिबोल गजुरेल, शिवकुमार मण्डल, गोपालबहादुर बम, धनबहादुर बुढा, कांग्रेसका सूर्यबहादुर केसी, नागेन्द्रकुमार, ज्ञानकुमारी छन्त्याल, राजपाका अमृतादेवी अग्रहरि, दुलारीदेवी खत्वेनी, प्रमोद साह, समाजवादीका सरिता गिरी, सूर्यनारायण यादवले हस्ताक्षर गरेनन् ।
नेकपा सांसद गोपालबहादुर बम पनि यहीवेला बिरामी परे । ‘घाँटीको इन्फेक्सन भएको छ । संसद्मा धेरै चर्काे बोलेर यस्तो भएको हो कि ! अन्तर्वार्ता पनि दिएँ । धेरै बोलेका कारणले हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘म संसद् आउन सक्दिनँ भनेर सचेतकलाई जानकारी दिएको थिएँ । एक भोटका कारण नतिजा तलमाथि पर्ने भएको भए म जसरी पनि उपस्थिति हुन्थेँ । तर, त्यस्तो थिएन । त्यसैले गइनँ ।’
संविधान संशोधनमा आफ्नो पूर्ण सहमति रहेको केसीले बताए । सरकारले गरेको काममा आफ्नो सहमति रहेको उनको भनाइ छ । ‘आफू उपस्थित हुन नसक्ने मैले सभामुखलाई पनि भनेँ, सचेतकलाई भनेँ,’ उनले भने, ‘हाम्रो भूमि छाड्न चाहँदैनौँ । लिपुलेक मात्रै होइन, सुस्तादेखि अतिक्रमित भूमि सबै फिर्ता ल्याउनुपर्छ ।’
समाजवादीकी सांसद सरिता गिरी संसद्मा उपस्थित थिइन्, तर प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाएर बाहिर निस्किन् । उनले आफ्नो विमतिको प्रस्ताव राख्न खोजेकी थिइन् । तर, सभामुखले खारेज भएको घोषणा गरेपछि उनी बैठकबाट बाहिरिइन् । ‘मेरो प्रस्ताव नै अस्वीकृत भएको सभामुखले जानकारी गराउनुभयो । मैले कुन तर्कका आधारमा त्यो संशोधन दर्ता गराएको छु, त्यो पनि मैले संसद्मा जानकारी गराउने अवसर पाइनँ,’ बाहिर पत्रकारहरूसँग उनले भनिन्, ‘मेरो मत देश र जनताले थाहा पाउन सकेन । हाम्रो लोगोमा के परिवर्तन भइरहेको छ, त्यसको आधार र कारणचाहिँ खुलाउनुपर्छ भन्ने मेरो मत हो ।’ यो समाचार आजको नया पत्रिकामा प्रकाशित छ।
एसइईको मूल्यांकनमा ८० नम्बरभन्दा बढी दिँदा कारण खुलाउनुपर्ने:राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड
रोकिएका सम्पूर्ण परीक्षा गरिने:लोक सेवा आयोग